That's so good, right?: Touching Sleeping Straight Friend
အလွန်ကို သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ နွေဦးရာသီအခါသာမယမှာ ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုဦးရယ် မြို့တစ်ခွင် ခြေဆန့်ကြပါတယ်။ သူနှင့် အခုလို နီးနီးကပ်ကပ်အတူသွားလာရတိုင်း ဖြစ်ပေါ်မိတဲ့စိတ်ကူးရိုင်းကတော့ သူ့ငပဲကြီးဘယ်လောက်ရှိမယ် ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ တို့ထိခံစားချင်တဲ့စိတ်လေ။ ဒါ စိတ်ကူးယဉ်မှုသက်သက်တစ်ခုပဲဖြစ်မှာပါ။ သူ အ၀တ်အစားတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ဘောင်းဘီလဲလှယ်ချိန်တိုင်းမှာ ဖောင်းကြွနေတဲ့ပေါင်ခွဆုံက အထုပ်အထည်ကို အတွင်းခံကနေတစ်ဆင့်သာမြင်မြင်နေရတာ အတော်ကြာနေပြီပဲ။ ဒါပေမဲ့…No….အင်း ဒီညတော့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်များရမလားပဲ….ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့အခန်းမှာ ဒီည ကျွန်တော်အိပ်မှာဗျ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အပြင်ကို တစ်နေကုန် ဒိုးကြတယ်လေ တနေကုန်အိမ်မပြန်ဘဲ။ ညကျရင် အိပ်ကောင်းဦး တော့မှာပါ။ ညနေစောင်း တရုတ်တန်းဘက် ဟိုသည်လျှောက်စားရင်း အပြာရောင်စကားလုံးတွေ ပြောကြ ဟိုသည်ငမ်းဖြစ်ကြပါတယ်။ တနေကုန် သည်ကောင် ခြေညောင်းအောင်လျှောက်ထားတော့ စောစောစီးစီး အိပ်ယာပေါ်ပစ်လှဲပြီးအိပ်တော့တာ ကျွန်တော်ကတော့ တီဗီက ကြည့်နေကြ ဇာတ်လမ်းတွဲလာတာကို ထိုင်ကြည့်နေဖြစ်သည်ပေါ့။
တစ်နာရီလောက်ကြာပြီးနောက်….ကျွန်တော့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မရတော့တဲ့ စူးစမ်းမှုကိုစလုပ်ဖို့အချိန်ကျပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်။ တို့ထိ လိုက်ရင် ဘယ်လိုများ ခံစားရမှာပါလိမ့်….သူ့တင်သားဆိုင်တွေကကောဘယ်လိုများလဲ စသဖြင့်ပေါ့ ကြည့်ချင်မြင်ချင်ပြီ။ အတွင်းခံ ခပ်တင်းတင်းမှာ မြင်နေရင်တဲ့ တင်အကွဲကြောင်းလေးက ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ရင်ပိုခုန်လာစေခဲ့သလိုပဲ။
ကြမ်းခင်းပေါ် မွေ့ယာထူထူ ချပြီးအိပ်နေတဲ့ သူ့အိပ်ယာပေါ် ကျွန်တော် မသိမသာဝင်လှဲလိုက်တယ်။ အိပ်ယာအစွန်းလေးမှာ အသာငြိမ်နေပြီးမှ ကျွန်တော့်လက်တွေ ဟာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိရာကို တွားသွားလိုက်တာပေါ့နော်။ ကံကောင်းတာက သူက ငြိမ်ငြိမ် လေးအိပ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း အသာ အယာလှုပ်ရှားရတာပေါ့ဗျာ။ ခပ်ပါးပါးအပေါ်က ခြုံထားတဲ့စောင်းပါးပေါ်ကနေ သိသိ သာသာမြင်နေရတဲ့ အထုပ်အထည်က ကျွန်တော်လက်တောင်လျှိုမ၀င်ရသေးခင်မှာ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်လေးကိုတောင် မှန်းလို့ရနေပြီ။ သူ ညအိပ်ဘောင်းဘီခပ်ပါးပါးကို ၀တ်ထားလို့များလားလို့ ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။
Wow!! သိပ်မမာသေးတဲ့အခြေအနေမှာပဲ သိပ်ငပဲထိပ်ကလေးကို စမ်းကိုင်ရတာက အားရစရာ ထွားလိုက်တာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် စောင်အောက်ကို လက်လျှိုသွင်းလိုက်ပြီး စောင်ပါးကိုနည်းနည်းမတင်လိုက်တယ်။ အင်း….အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုဝတ်ထားသလို အပေါ်က ညအိပ်ဘောင်းဘီပါးတစ်ထည်ကို သူထပ်ဝတ်ထားတာပဲ။ အပေါ်က၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီက ခပ်ပါးပါးချည်ထည်ဘောင်းဘီ တိုပဲဆိုတော့ သူ့ပေါင်ဖွေးဖွေးက မွှေးညှင်းနုလေးတွေက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရေးရေးမြင်နေရတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေပိုမို မြန်ဆန်လာသလို ခပ်သာသာသွေးတိုးစမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်က စောင်ပါးလေးကို ဘေးကိုဆွဲဖယ်ပစ်မိရဲ့။ လေအေးပေးစက်ကို ကျွန်တော် ပိတ်လိုက်တာကောင်းတယ် တော်ကြာ ကျွန်တော့်ကြောင့် ရှင်းလင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင် သူငယ်ချင်းလေး အအေးပတ်သွား မှာ။
ခါးစပ်က ဘောင်းဘီလေးကို ဖြည်းဖြည်း….တကယ့်ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲချွတ်တယ်…..နောက်တစ်ဆင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို အသာအယာ ဆွဲခွာသပေါ့လေ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလည်းမလုပ်ရဲ မကျွတ်မှာလည်းစိုးရိမ်သေးဆိုတော့ အသာလေးဆွဲချွတ်နေတာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆီးစပ်က အမွှေးနုလေးတွေပေါ်လာသလို ဖွေးနေတဲ့ သူတင်သားဆိုင်တွေကလည်း အံထွက်လာတယ်။ သူ့အမွေးနု လေးတွေက အုံထူပေမယ့် နုညံ့လွန်းတယ်…အား…နောက်ဆုံးတော့ မျှော်လင့်နေတဲ့ရတနာကြီးပေါ်ထွက်လာပါပြီ…ရှည်လျားကြီးမား သော ရတနာ…။ ကြီးထွားလွန်းသယောင်ရှိပေမဲ့ ပျော့နေတယ်လေ။ ဒါကြီးနဲ့များ ဖီလင်အပြည့်ခံစားရရင် ကျွန်တော်သေသွားနိုင်တယ်။ ခပ်တုန့်တုန့်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ဟာ သိပ်မကြမ်းစေဘဲ သူ့ငပဲဆီကိုရွေ့တင်လိုကတာ အိုး…God… ကိုင်ရတဲ့ဖီလင်က ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး….မိုက်တယ်ဗျာ…ဖီးလ်ပဲ။ တကယ့်ကို ရွရွလေး သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို ပွတ်သပ်လိုက်….ကွမ်းသီးခေါင်း လေးကို လက်မနဲ့ပွတ်သပ်တယ်….ပြီးတော့ ထိပ်အရေပြားလေးကို ကလိတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီ…အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သူက လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာတာကြောင့် ကျွန်တော် ခုတင်ပေါ်လှစ်ကနဲတက်လိုက်ပြီး အိပ်ချင်ယောာင်အမြန်ဆောင်လိုက်ရပါရဲ့။ သူ့ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ပြီး ၁၀ မိနစ်လောက်ငြိမ်နေရတာပေါ့နော် စိတ်ချလက်ချက်ဖြစ်သွားအောင်။
အတန်ကြာငေးနေပြီးမှ ကျွန်တော်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားမိပါရဲ့။ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခပ်ပါးပါးလွှမ်းထားတဲ့ စောင်ပါးကို အသာဆွဲဖယ်လိုက် တော့ သူ့ငပဲက ညာဘက်ပေါင်ခြံနားမှာ မမာ့တမာကပ်လို့။ အသက်ကို ၀၀ရှူ “ဒါ လွယ်လွယ်လေးပါ လွယ်လွယ်လေး” လို့ ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်ရင်း မပြီးသေးတဲ့ခရီးကိုဆက်ဖို့ ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲရှိရာဆီကိုခေါင်းကိုငုံ့လိုက်ရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ပါးစပ်နဲ့စုပ်ငုံလိုက်တယ်ပေါ့။ သူ့ငပဲထိပ်ပိုင်းပျော့ပျော့လေးဟာ ပူနွေးနေတဲ့ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကြားဝယ် ခပ်လယ်လယ်ဖြစ်နေရော။ ခဏကြာတော့ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ပါးစပ်ထဲထိငုံစုပ်လိုက်ရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းတလျောက် လျာကိုအပြား လိုက်ကပ်ပြီး လျာနဲ့ကလိဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို မက်မက်မောမောနမ်းရှိုက်…..လိင်တံတလျောက်နွေး သွားအောင် လျာနဲ့သရပ်လိုက်တာ အစုန်အဆန်ကိုဖြစ်ကရော။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ ပြန်သွင်းလိုက်ကာ အချိန် ခပ်ကြာကြာ စုပ်မျိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ချက်တစ်ချက် အာခံတွင်းထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်တိုင်း သူ့ငပဲကထွားထွားတက်လာပြီး မာတောင့်လာပါတယ်။ အဲဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို သတိရနေတာပါပဲ။ ရှည်လျားထွားကြိုင်းလာတဲ့ သူ့ပစ္စည်းကို အာခံတွင်းထဲအဆုံးထိ နှစ်ချက်လောက် သွင်းကြည့်လိုက်တာ ကျွန်တော် အေ့ာအံမိမတတ်ဖြစ်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတုန်း သူလှုပ်ရှား လာတာကြောင့် စိတ်ထဲဖျဉ်းကနဲဖြစ်သွားမိရလောက်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားသွားရပါရဲ့။ သူက ပက်လက်မကျတကျလှဲအိပ်နေရာကနေ ဘေးစောင်းအိပ်လိုက်တော့ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကလွှမ်းထားတဲ့ စောင်ပါးဟာဘေးကိုကျသွားပြီး လုံးဝန်းပြည့်တင်းတဲ့သူတင်သားဆိုင်တွေဟာ ရှင်းကနဲ လင်းကနဲပေါ်လာတာပေါ့နော်။ သူ့တင်သားဆိုင်တွေဟာ ပြည့်တင်းပြီးဖောင်းကားနေတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝယ် ထိကိုင်လိုက် ရင်ပဲ ပေါက်သွားမလားအောက်မေ့မိရော။
တင်သားနှစ်မွှာကြားက ပေါ်နေတဲ့ အမွှေးနုလေးတွေဝန်းရံထားတဲ့ ခရေ၀လေးက ပန်းသွေးရောင်ကိုပြေးလို့ပါ။ အဲဒါကို မနည်းရှာကြည့်ရ မယ်…ကျွန်တော်မရဲတရဲ တင်သားဆိုင်နှစ်ဖက်ကိုအသာဖြဲကိုင် ခရေ၀လေးကို လေနဲ့ဖွဖွလေးမှုတ်ပြုကလိလိုက်တော့ သူ တွန့်ကနဲဖြစ် သွားသလားမသိဘူး။ တင်သားနုနုလေးတွေနား ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုအသာကပ် အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တဲ့လေငွေ့နွေးနွေးလေးက သူ့ ခရေ၀က အမွှေးလေးတွေကိုရိုက်ခတ်နေတာက သူ့အတွက်တော့်မသိဘူး ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကလိ ကလိဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာထဲက လျှာပူနွေးနွေးကို အပြားလိုက်အသာထုတ်ကာ သူ့ခရေ၀တလျောက်ကို နှစ်ကြိမ်လောက် သရပ်ဖြစ်တော့ သူ့ကျောပြင်က တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲများဖြစ်သွားသလား…။
ဟီး ဟီး….သူ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကာ မနိုးတစ်ဝက် အိပ်တစ်ဝက်နှင့် သူ့ငပဲသူကိုင်က လက်ကစားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် အိပ်ချင် ယောင်ဆောင်ပြီး ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ သူ ပြန်ငြိမ်သွားချိန်မှာတော့ ခဏနေကလိုပဲပြန်ကလိ…..အိုး သူသုံးတဲ့ ဂျပန်ရေချိုးဆပ်ပြာ ရည်ရဲ့အနံ့ကိုအလွတ်ရရောပဲ။ အသာလေးငြိမ်သူလှုပ်ရှားနေတာကို စောင့်ကြည့်နေလိုက်တာ ၁၅မိနစ်လောက်အကြာမှာ ပါးလျားသော စောင်ဟာ စိုရွှဲသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်။
တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားတဲ့ သူ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်လည်း အသက်ကိုမျှင်းမျှင်းရှူရှိုက်ကာ အိပ်မောကျသွားရပါတယ်။ နက်ဖြန် မိုးသောက်ယံမှာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးထားရမှာပါလိမ့်…သူကကော ကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုများ…..
Alex Aung (26 Dec 5013)
Note: သူငယ်ချင်းတို့ဖတ်ဖို့ တိုပေမယ့် အပျင်းပြေ
Posted by Alex Aung at 6:53 AM
Top Ten Reasons Girls Need Gay Best Friends